Unyaka wezi-2017 ubungomunye wemfudumalo nesomisa kunayo yonke emlandweni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amazinga okushisa emhlabeni wonke aqhubeka nokukhuphuka njengoba imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iqhubeka. Ngonyaka odlule u-2017 eSpain ubungomunye wemfudumalo emlandweni. Impela bekungokwesibili sishisa kakhulu emlandweni, owokuqala kwaba unyaka ka-1965.
Ngabe ufuna ukwazi imininingwane ngalo nyaka we-2017?
1 Isifinyezo sonyaka we-2017
2 Amagagasi okushisa namakhaza
Isifinyezo sonyaka we-2017
Amazinga okushisa aphakathi nonyaka kulo nyaka abelokhu ephakeme kakhulu kusukela ngo-1965 enamanani ayi-16,2 degrees centigrade. Ngaphezu kwalokho, kube unyaka owome kakhulu nge amalitha angama-474 kuphela ngemitha eyisikwele yemvula. Lawa manani aphansi ngama-27% kunencazelo ejwayelekile.
Ngokusho kweState Meteorological Agency (Aemet), amazinga okushisa ngo-2017 andise isilinganiso ngama-1,1 degrees inani elijwayelekile lonyaka lesikhathi sokubhekisisa 1981-2010 nangama-0,2 degrees aphezulu kakhulu, abhaliswe eminyakeni 2011, 2014 nango-2015.
Yize unyaka uqale ngoJanuwari obandayo kakhulu ngenxa yamagagasi abandayo enzekile, uFebhuwari wayefudumele kakhulu kanti intwasahlobo yayifana. Isilinganiso samazinga okushisa entwasahlobo zazingama-1,7 degrees ephakeme kunokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ihlobo nalo belifudumele kakhulu, lidlula izilinganiso ngama-degree angu-1,6.
Ngesikhathi sokuwa kulindeleke ukuthi kwehle futhi imvula inyuke. Kodwa lokhu kwakungenjalo. Amazinga okushisa ahlala kuma-degree angu-0,8 ngaphezu kwesilinganiso salesi sikhathi sonyaka namanani emvula aphansi kakhulu, okwenza imiphumela yesomiso ibangele umonakalo omkhulu.
UDisemba ube nomlingiswa obandayo, kufinyelela kuma-degree angu-0,4 ngaphansi kwencazelo, kepha kubangelwe izingqimba namagagasi abandayo enzekile.
Amagagasi okushisa namakhaza
Ngesikhathi sehlobo kube neziqephu ezivamile lapho izinga lokushisa beliphezulu kakhulu kunokujwayelekile, enhlonhlweni naseziqhingini zeziqhingi. Kwenzeke amagagasi amakhulu amathathu okushisa. Esokuqala sabhaliswa phakathi kukaJuni 13 no-21 futhi sithinte kakhulu entshonalanga, maphakathi nasenyakatho-mpumalanga yenhlonhlo; okwesibili kwenzeka phakathi kukaJulayi 12 no-16, lapho amazinga okushisa aphakeme kakhulu ehlobo -up to 46,9 degrees eCórdoba noma 45,4 eBadajoz- futhi okuthinte kakhulu eningizimu nasenkabeni yenhlonhlo, kanti okwesithathu phakathi kuka-2 no-6 Agasti, okuthinte kakhulu eningizimu nasempumalanga yenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic.
Ngakolunye uhlangothi, u-2017 ubuye waba namagagasi abandayo eyehlise amazinga okushisa. Igagasi elibandayo elenzeka phakathi kukaJanuwari 18 no-20 lathinta iNhlonhlo yase-Iberia neBalearic Islands ngenxa yomoya wezwekazi owadala amazinga okushisa aphansi onyakeni (-13,8 degrees ePort of Navacerrada noma -13,4 eMolina de Aragón).
Unyaka we-2017 ujoyina omunye unyaka wokushoda kwe-hydrological abawakhayo isomiso esibi kunazo zonke iSpain esiye sabhekana naso kusukela ngo-1995. Ekwindla nasentwasahlobo, amanani emvula abephansi kakhulu kangangokuthi kulo nyaka kungokwesibili okoma kunayo yonke ochungechungeni lomlando, owokuqala kube u-2005. Yizimiso ezijwayelekile zemvula kuphela ezeqiwe futhi ukukhanya endaweni ehlanganisa inyakatho yezwe laseBasque nengxenye enkulu yeNavarra, kanye neMallorca nezingxenye ze-Alicante.
Ngokuphambene, kwakungu-25% ngaphansi kulezi zimiso engxenyeni enkulu yengxenye eseningizimu yenhlonhlo, izindawo ezinabile eCastilla y León, eCatalonia, engxenyeni eseningizimu ye-Aragon, engxenyeni esenyakatho yoMphakathi waseValencian, izindawo ezisentshonalanga nasempumalanga yeGalicia, iCastilla-La Mancha, iMadrid, iCanary Islands kanye Ibiza.
Lo nyaka ujoyina abantu abafudumele futhi abomiswe kakhulu yimiphumela ekhulayo yokufudumala kwembulunga yonke, okuba ngowesithathu ngokufudumele okurekhodiwe selokhu kwaqala inguquko yezimboni kanye nokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Unyaka wezi-2017 ube ngomunye wemfudumalo nesomisa kunayo yonke emlandweni